4 Elements iji duo Ọgbọ Na-ebute Ọsọ na Ahịa Ahịa | Martech Zone
Nnyocha si Venturebeat si ahịa akpaaka ọmụmụ na-egosi na, ewezuga ọdịiche dị iche iche nke atụmatụ nke ikpo okwu ọ bụla, nnukwu nsogbu nke ịzụ ahịa azụmaahịa maka azụmaahịa bụ ịghọta etu o si dabaa na nzukọ ha.
Ikekwe nke ahụ bụ okwu… ụlọ ọrụ na-anwa dabara adaba akpaaka kama ịchọta ikpo okwu nke kwekọrọ na usoro ha, ike na ihe onwunwe ha. Ike gwụrụ m kasị mma nke Ndepụta akpaaka ahịa ma ọ bụ ọbụnadị ụzọ anọ. Mgbe anyị mere nhọrọ ndị na-ere ahịa maka ndị ahịa anyị, anyị na-enyocha akụkụ ọ bụla nke nzukọ ha ịchọta usoro dị mma - ma ọ bụ azịza ziri ezi ebe ikpo okwu ziri ezi nwere ike ijikọta. Ọ dị mfe karịa iji dozie nsogbu karịa ịgbanwe usoro na ọdịbendị niile nke nzukọ.
Nke ahụ kwuru, a ka nwere edu ọgbọ Ohere di na itinye aka na ikpo okwu ahia di elu. Nke a bụ ihe anọ nke TechnologyAdvice gosipụtara nke mere ka ndị na - eduga n'ọzọ rụpụta ihe:
Mmekọrịta na Ahịa - nwere ike igbanye 20% abawanye na ohere ahia.
Email Ntapu mkpọsa - email bụ 3x nwere ike ime ka zụọ karịa mgbasa ozi mmekọrịta.
Ibe akwukwo - iji akpaaka na njikọta na peeji nke ọdịda nwere ike ibute ọnụọgụ ntụgharị dị ka 50%.
Nhazi na A / B Ule - ozi ịntanetị nkeonwe na-emepụta 6x ego ha nwetara ma e jiri ya tụnyere ozi ịntanetị na-abụghị nke ahaziri iche.
Tags: ule ulentapu mkpọsaemail mkpọsa mkpọsambido peeji nkeedu ọgbọkeonweahịa mmekota